Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A December 2010 (8)
Q and A December 2010 (8)
1. ရင်သားရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှာ လက်မအရွယ် အလုံးလေးတွေ့ရလို့
2. လည်ပင်းမှာ အကျိတ်လေးတစ်ခု ဖြစ်နေတာ
3. မျက်လုံးထောင့်မှာ အပ်ဖျားလေးနဲ့ ထိုးလိုက်သလို နာသွားတာ
4. ဝမ်းသွားရင် တစ်ခါတစ်ခါ သွေးတွေချည်း သွားပါတယ်
5. နှာရည် တောက်တောက်ယိုပြီး၊ နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်မသန်ဘူး၊ Asthma check up လုပ်ပြီး၊ ချောင်းဆိုးရင် တလကျော် ကြာတက်ပါတယ်
6. ကောင်မလေးရဲ့ အသားက ပုံမှန်ထက် ပိုပူနေတယ်
သမီး အသက် ၃၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ညာဘက် ရင်သားရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှာ လက်မအရွယ် အလုံးလေးတွေ့ရလို့ ဆရာဝန်တော့ မပြရသေးပါဘူး။ ခွဲစိတ် ခံရမှာကို အရမ်းကြောက်လို့ပါ။ စာတွေထဲမှာ ဖတ်ရသလောက်တော့ ကင်ဆာ သမီးအရွယ်မှာ မဖြစ်သေးဘူးလို့ ဖတ်ဘူးပါတယ်။ ကင်ဆာ ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲ။ ကင်ဆာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လို မခွဲမစိတ်ရပဲနဲ့ ပျောက်နိုင်ပါသလဲ။ တဆိတ်လောက် ဖြေကြားပေးရှင့်။
ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကြွက်ဝင်နေတာ ဖြစ်မယ်။ လန့်လဲ မသွားနဲ့အုံး။ ဒီအရွယ်တွေ အဖြစ်အများဆုံး ရင်သားအကျိတ်ကို Fibroadenoma F/A ခေါ်တယ်။ သေခြာ စမ်းရင် ဟိုပြေး၊ ဒီပြေး ရွှေ့နေလို့ Breast mouse လို့ပါ ခေါ်ကြတယ်။ ဖြစ်တဲ့သူတွေ အရွယ်ငယ်တယ်။ အသက် ၂ဝ-၃ဝ။ အိမ်ထောင် မကျသေးသူ။ ကျရင်လဲ ကလေး မရှိသူတွေ အဖြစ်များတယ်။ မနာဘူး။ ၁ လက်မရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံကနေ ၁ လက္မလောက် ရှိတယ်။ အဝိုင်း-ဘဲဥပုံရှိတယ်။ ပြေးနေတယ်။ အထက်၊ ဘေး၊ အောက် ဘာနဲ့မှ တွယ်ကပ်မနေလို့။ ဖြစ်တာလဲကြာတယ်။ တဖြေးဖြေး ကြီးလာမယ်။ ခွဲစိတ်ကုမှ ပျောက်တယ်။ ဘယ်ဆေး၊ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မပျောက်ဘူး။ နောက်တနေရာမှာ တခါလာဖြစ်သူတွေလဲ ရှိတယ်။ အသက်ကြီးရင်လဲ ကင်ဆာ မဖြစ်ပါ။ မခွဲရင် ကြီးလာတာဘဲ ရှိတယ်။ ကြီးမှခွဲရင် အမာရွတ်ကြီးမှာပေါ့။
ကျွန်တော်က အသက် ၂၇ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့ လည်ပင်းမှာ အကျိတ်လေးတစ်ခု ဖြစ်နေတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာ။ ပိုလည်းကြီးမလာသလို နာလည်း မနာကျင်ပါဘူး။ ယင်းအကျိတ်ကို မခွဲမစိတ်ရပဲ ပျောက်ကင်း သက်သာသွားမယ့် နည်းလမ်းလေးများရှိရင် ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒီအကျိတ် ပေါ်လာတာကတော့ ၂ နှစ် ကျော် လောက်ရှိပါပြီ။ အသားရေ တင်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း စတဲ့ ခံစားချက်မျိုးလည်း တစ်ခါမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကြီးထွားလာခြင်းလည်း မရှိပါခင်ဗျာ။ လက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်လျှင် အဆီခဲကဲ့သို့ အရေပြား အောက်တွင် အနည်းငယ်ရွေ့လျားနိုင်ပါသည်။ အမြစ်တွယ် စွဲမြဲနေခြင်းမျိုးမရှိပါ။ ကျွန်တော့ အကျိတ်ပုံကိုလည်း Attachment နဲ့ တွဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မည်သို့ ကုသ ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး သိလိုပါတယ်။
ရောဂါအဆိုး မဟုတ်ပါ။ Cyst ခေါ်တဲ့ အိတ်အကြိတ်၊ ဒါမှမဟုတ် Lipoma ခေါ်တဲ့ အဆီကြိတ် တခုခုဖြစ်တာပါ။ လက်နဲ့ သေခြာစမ်းမှာ တိကျမယ်။ မတိကျလဲ အရေးမဟုတ်ပါ။ ကုသရတာရော နောင်ဖြစ်နိုင်တာပါ အတူတူသာ ဖြစ်တယ်။
ခွဲရမှာပါ။ ထုံဆေးနဲ့သာ ခွဲရတယ်။ Excision လုပ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ခွဲ-ထုတ်ပြစ်လိုက်တာကို ဆိုတာပါ။ ကင်ဆာ မဖြစ်စေပါ။ မခွဲသေးရင် ကြီးလာမှာသာရှိတယ်။ တချို့တော့ ပိုးဝင်ရင် အနာလို ဖြစ်တယ်။ သိပ်ရှားပါတယ်။ ရိုးရိုးဆရာဝန်လဲ ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။ Minor operation သာဖြစ်ပါတယ်။
ကျမရဲ့ ဘယ်ဖက် မျက်လုံးထောင့် (နှာခေါင်းဖက်) မှာ အပ်ဖျားလေးနဲ့ ထိုးလိုက်သလို နာသွားတာ ၂ဝ၁ဝ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကြိမ်ဘဲ ဖြစ်ပြီး မေ့ပျာက်သွားပါတယ်။ ကျမလဲ ထူးဆန်းတဲ့ အတွေ့အကြုံမို့ မှတ်မိနေပေမဲ့ အလေးမထားမိပါ။ နောက်တခါ ဒီလိုဘဲ ဖြစ်ပြန်တယ် အဲဒါ ဇွန်လမှာ ခုတခါ နိုဝင်ဘာမှာလည်းဖြစ်ပြန်တယ်။ စာကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ အရင်လိုတော့ မပြတ်သားပါ။ ဒါပေမယ့် ခုထိတော့ မျက်မှန်မလိုသေးပါ။ ဆရာဝန်ထံ သွားမယ် စိတ်ကူးပေမဲ့ ခုထိ မသွားဖြစ်သေးပါ ဘာဘဲပြောပြော ကိုယ့် မြန်မာဆရာဝန်က မြန်မာလို ရှင်းပြတာတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။
ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့တော့ ရောဂါနာမည် တပ်မရသေးပါ။ နာတယ်ဆိုတာ နာစေနိုင်တဲ့ အာရုံကြောကို တခုခုဖြစ်စေလို့ပါ။ ပိုးဝင်တာ၊ ခိုက်မိတာ၊ ရောင်တာ၊ ဖိမိတာ စသဖြင့်။ အပ်ဖျားနဲ့ထိုးသလိုဆိုတော့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာလာဖြစ်တာ။ ရောဂါဝေဒနာ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျက်စိအကြည့်နဲ့လဲ ဆိုင်တယ် ပြောမရသေးပါ။ အကြည့်မှာ အနီးဖြစ်ဖြစ် အဝေးဖြစ်ဖြစ် အားနည်းလာ မှုံလာမယ်။ မျက်ရိုက်ကိုတာ ဖြစ်လာမယ်။ ဒီတော့ ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ နာတဲ့ကိုက်တဲ့အခါ Pain killer တခုခုသာ သောက်ပါ။ ထူးခြားလာရင်လဲ ပြောပေါ့။
Dec 24, 2010 at 3:35 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ကတော့ ကျွန်တော် ဝမ်းသွားရင် တစ်ခါတစ်ခါ သွေးတွေချည်း သွားပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လေးငါးရက်လောက်မှ တစ်ခါလောက်သွားပါတယ်။ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက် သွားပြီးတော့။ အခု နောက်ပိုင်း တစ်ခါတစ်ခါ အိမ်သာတတ်ပြီးလို့ရှိရင် သွေးစလေးတွေ တစ်ချက်တစ်ချက် တွေ့တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ လိပ်ခေါင်း လို့ ခေါ်ပါသလား။ အမြဲတမ်းတော့ သွေးပါနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ စအိုမှာလဲ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ပုံမှန်ပါဘဲ။ ဗိုက်အောင့်တာ ဘာညာ ဘာမှ မခံစားရပါဘူး။ လူကောင်းလိုပါဘဲ။ တစ်ချက်တစ်ချက် သွေးပါတာဘဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် အသက်က သုံးဆယ်တစ်ထဲမှာပါ။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပျောက်နိုင်မတုန်း။ ဘာဖြစ်တာတုန်း ဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်နေတာက အိုင်ယာလန်မှာပါ။ ပြီးတော့ အသောက်အစားတော့ ကျွန်တော် နဲနဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့လဲ ဆိုင်မလားမသိဘူး။
1. ဖြစ်နိုင်တာတွေထဲမှာ လိပ်ခေါင်းကိုအရင် ဖယ်ထုတ်ရမယ်။ ဖြစ်စလူတွေမှာ ဝမ်းသွားတဲ့အခါ အသားစထွက်မယ်။ ပြီးရင် ပြန်ဝင်တယ်။ ရေသုံးနေရင် သတိထားမိမယ်။ ကြာရင် ပြန်သွင်းပေးမှ ဝင်တယ်။ သွေးပါတာက ဝမ်းချုပ်ရင် ပိုသိသာတယ်။ သွေးက အနီရောင်ဖြစ်မယ်။ တခြား အကျိအချွဲ မပါဘူး ဝမ်းသွားတဲ့ အကြိမ်လဲ ပုံမှန်ဖြစ်မယ်။
2. နောက်တမျိုးက ဝမ်းကိုက်တာ။ အကြိမ်များမယ်။ ဗိုက်နာပြီးသွားမယ်။ ရစ်နာတာ။ သွေးက အကျိအချွဲနဲ့ ရောနေမယ်။ သွေးက များလဲ မများဘူး။ မဲနေနိုင်တယ်။
3. နောက်တခု တနေရာရာက သွေးထွက်တာ။ များသောအားဖြင့် အစာလမ်းအောက်ကလာရင် သွေးကနီမယ်။ အစာအိမ်လို အထက်ကလာရင် သွေးက မဲမယ်၊ နက်နေနိုင်တယ်။ လေနာဖြစ်ဖြစ်၊ အသဲခြောက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ အရက်များလို့ဖြစ်ဖြစ် တွဲနေတတ်တယ်။ မျက်စိ-အသား ဝါ-မဝါကြည့်ပါ။
4. တခြားနေရာတွေက ဥပမာ၊ သွားဖုံး၊ နှာခေါင်း စတဲ့ဆီက သွေးယိုတတ်သလား။ သွေးခဲစေတတ်တဲ့ အရာတွေ နည်းနေသူမှာ လာဖြစ်တယ်။ ဗီတာမင် စီ နဲ့ ကေ သောက်ရတယ်။
5. ဆေးစစ်စရာ မလုပ်သေးရင် ဗီတာမင် ဘီ၊ စီ သောက်ပါ။ သံဓါတ်ဆေး သောက်ပါ။ အစားအစာမှာ ဒီဓါတ်ပါတာ စားပေးရမယ်။ အရက်အတွက် အသဲအားဆေး တခုခုလဲသောက်ပါ။
၁) သမီးက ၃၂နှစ်၊ စာရင်းကိုင်။ အမျိုးသား ၃၈၊ Supervisor အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်ကျော်။ သမီး အရင်က Aircon ခန်းပါ ရုံးခန်းတခုမှာ သုံးနှစ်နီးပါး အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ တနှစ် ကျော်လောက်ကစပြီး နှာမွှန်သော ဝေဒနာ စခံစားရပါတယ်။ နှာရည် တောက်တောက်ယိုပြီး၊ မျက်ရည်စီးကျလို့ လူကြားထဲ မသွားချင်ပါဘူး။ Fulmol သောက်တော့ ခဏသက်သာ ပေမယ့် ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ ဆောင်းတွင်းဆိုရင် နှာပိတ်နေလို့ ကောင်းကောင်း မအိပ်ရဘူး။ နှာသီးနှစ်ဖက်စလုံးပိတ်နေလို့ အသက်ရှုရ အရမ်းခက်ပါတယ်။ Spray မသုံးဘူးပါ။ ယခု (့) မှာ အလုပ် လုပ်နေပါတယ်။ နှာမွှန်ခြင်း မခံစားရတော့ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ June က တခေါက် ပြန်တော့ ပြန်ပြီး နှာမွှန်နေလို့ ဘယ်မှ မသွားရပါဘူး။ စိတ်အရမ်းညစ်ပါတယ်။ လူကြား မသွားရဲအောင်ပါပဲ။
၂) ပြီးခဲ့တဲ့လက Menstruation ဖြစ်တာ အရမ်းနာလို့ poly clinic ပြပါတယ်။ Mefenamic acid and Famotidine ပေးပါတယ်။ အခဲဆင်းတာ သက်သာသွားပါတယ်။ သမီးတို့ ကလေးယူဖို့ကြိုးစားတာ အခုထိ မထူးခြားပါဘူး။ တားဆေး မသုံးဘူးပါ။ Condom သုံးပါတယ်။ ဘာအားဆေး စားရမလဲ ညွှန်ကြားပေးပါ။ သမီးတို့ နှစ်ယောက်စလုံး လိင်ကိစ္စ စိတ်မသန်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
၃) ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်မှာ ချောင်းဆိုးပြီး အသက်ရှုခက်လို့ Poly clinic ပြတော့ Asthma check up လုပ်ပြီး Spray ရှု ခိုင်းပါတယ်။ Prednisolone6tabs ကို လေးရက်သောက်ခိုင်းထားပါတယ်။ အခု သက်သာသွားပါပြီ။ Spray သုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘာတွေစားရမလဲ ရှောင်ရမလဲ မညွှန်ကြားဘူး။ နောက်ထပ် မဖြစ်ချင်လို့ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။
၄) အမျိုးသားမှာတော့ သလိပ်ကပ်တာ ခံစားရပါတယ်။ တခါတရံ ချောင်းဆိုးရင် တလကျော်ကြာတက်ပါတယ်။
၁။ Allergic rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း ကို ဖတ်ပါ။
၂။ Female Libido အမျိုးသမီး “စိတ်” နည်းနေခြင်း နဲ့ Aphrodisiac လိင်စိတ်အားပေး အစာနဲ့ ဆေးများတွေကို ဖတ်ပါ။
၃။ နှာမွှန်-နှာပိတ်တာ နဲ့ ပန်းနာလိုဖြစ်တာ ဆက်စပ်နေတယ်။ ဘာနဲ့ အဆင်မပြေသလဲ ရှာပါ။ အေးတာလား၊ အနံ့အသက်လား၊ အစားအသောက်လား၊ စသဖြင့်။ Asthma ပန်းနာ ကိုလည်း ဖတ်ပါ။
၄။ သလိပ်-ချောင်းဆိုးအတွက် Antibiotic အရင်သောက်ပါ။ Amoxacillin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်။ ၅-၇ ရက်။ လိုအပ်ရင် (လူကပိန်လာမယ်၊ ညနေနဲနဲကိုယ်ပူမယ်၊ ချောင်းဆိုးကြာမယ်) ဓါတ်မှန်ရိုက်ပါ။ သလိပ်စစ်ပါ။
ကျွန်တော့် ကောင်မလေးရဲ့ အသားက ပုံမှန်ထက် ပိုပူနေတယ် ဆရာ။ အတွင်းထဲမှာလည်း ပူနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါ သူမှာ နေမကောင်းများ ဖြစ်တော့မလား၊ ဘာများဖြစ်လို့လဲဆိုပြီး စိတ္တဇ ဖြစ်နေရတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး အသားပူတာက ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာလည်း ပြောပြပေးပါ။ နောက်ပြီး သူက မကြာခဏ နှာမွန်တယ်ဆရာ၊ အထူးသဖြင့် မနက်အိပ်ရာထ ချိန်ဆိုရင် ပိုပြီးဆိုးတယ်။ (အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ) အဲ့ဒီလို အသားပူတာနဲ့ နှာမွန်တက်တာ၊ နောက်ပြီး ပိန်နေတာတွေက ကိုယ်တွင်းရောဂါ တစ်ခုခု ရှိနေလို့များလားဆိုတာ စိတ်ပူလို့ ပါဆရာ။
ပူနေတယ်လို့ ခံစားရတာ ရောဂါနာမယ် မဟုတ်ဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာတခုသာ ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့လူလည်း နည်းတယ်။ တခြားဟာတွေပါ ကြည့်ရလိမ့်အုံးမယ်။ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါ။ သွေးအား နည်းသလား။ လည်ပင်ကြီး ဟော်မုနုး အနည်း-အများ၊ နှလုံးခုန်နှုံး၊ စိတ်အခြေအနေ၊ ရာသီ၊ စတာတွေ သိခြင်ပါတယ်။ ပြောပြပါ ရောဂါဆိုး မဟုတ်ဘူးလို့။
နှာမွှန်တာကတော့ တမျိုးဖြစ်ပြန်တယ်။ (အလာဂျီ) သဘော ဖြစ်နိုင်တယ်။ အနံ့၊ အထိအတွေ့ တခုခုကို သူ မကြိုက်ဘူး။ စိတ်က မကြိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်က-သွေးက မကြိုက်တာ။
ပိန်တာက မျိုးရိုးလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ရောဂါနဲ့လည်း ဆက်စပ်နိုင်တယ်။ ထူးပြီး ပိန်လာသလား။ ငယ်ကတည်းကလား။
ဆေးစစ်တာတွေ မလုပ်သေးရင် အသားအရည် ဖြူရော်ရော်နေသလား။ ရင်တုံသလား။ စိတ်တိုသလား။ နှလုံးခုန်တာက တမိနစ် ဘယ်လောက်လဲ။ ကိုယ့်ဖါသာ လက်ကောက်ဝတ်မှာ လက်မ အထက်နားကနေ စမ်းရင် သိပါတယ်။